Yan Aung: ကျွန်တော့်ရဲ့ Typical ညနေခင်းလေးတစ်ခု
ညနေခင်း class ကပြန်လာတော့ အခန်းဖော်အိမ်မှာ ပြန်ရောက်နေပြီ။ ဘာဟင်းချက်မလဲလို့ အဖော်ညှိတော့ ၀က်သားဟင်းတဲ့။ ကျောပိုးအိတ်ကိုချ၊ အ၀တ်အစားလဲပြီးတော့ မီးဖိုချောင်စ၀င်ရပါတော့တယ်။ အမေနဲ့ဝေးနေရတော့မှ အမေ့အိမ်မှာနေရတာ ဘယ်လောက်ဇိမ်ကျတယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်တော့တယ်ဗျာ။ ထမင်းတည်ပြီးတော့ ၀က်သားကိုစပြုတ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကြက်သွန်ဖြူနီ ဆီသတ်ထားပြီးတော့ online မှာဝက်သားဟင်းချက်နည်းကို Google လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ တွေ့တော့တွေ့ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ထည့်ခိုင်းတဲ့ အဆာပလာတွေက များလွန်းနေတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ဘယ်လိုလုပ်အဲလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှိမှာလဲ။ Forget it!
ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ပဲ ကိုင်လိုက်တော့တယ်ဗျာ။ ၀က်သားကိုရေပြန်စစ်ပြီးတော့ အိုးထဲကိုပြန်ထည့်၊ ဆီနည်းနည်း၊ ဆားနည်းနည်း၊ အချိုမှုန့်နည်းနည်း ကြည့်ကောင်းအောင်ထည့်ပြီးတော့ cinnamon, red pepper, chili, meat tenderer အားလုံးကို ရောသမမွှေပေးလိုက်တယ်။ သြော်. ရေ ၂ခွက်ထည့်လိုက်သေးတယ်။ Meanwhile, ကြက်သွန်ဖြူနီကို golden brown ဖြစ်အောင်ဆီသတ်လိုက်ပြီး ၀က်သားအိုးထဲကို လောင်းထည့်လိုက်တယ်။
အာ.ဟ၊ ဆိုးတော့မဆိုးဘူးဗျ။ မွှေးပြီးတက်လာတယ်။ နာရီဝက်လောက်မီးဖိုပေါ်တင်ထားရင်းနဲ့ ညနေစာနည်းနည်းတီးလိုက်တယ်။ အခန်းဖော်ကတော့ မွှေးတယ်လို့ပြောနေတယ်။ ဟားဟား
Adventure တစ်ခုတော့ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြန်ပြီဗျို့။ ဟင်းလာချက်ပေးမယ်လို့ ပုံပြောသွားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုတောင် မဆီမဆိုင် သေသေချာချာကိုတွေးမိလိုက်ပြီး ၀မ်းသာဝမ်းနည်းဖြစ်သွားရသေးတယ်ဗျာ။
ခု ဂျူးရဲ့ ၀တ္ထုတိုဖတ်နေတယ်။ ဖတ်မလား၊ တင်ပေးမယ်လေဗျာ။ မာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေဆို ကျွန်တော်တော်တော်နှစ်သက်တယ်ဗျ။ ဒီဝတ္ထုလေးကိုလည်း စာဖတ်သူနှစ်ခြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပြီးရင်စာဆက်ရေးဦးမယ်။ ခုရေချိုးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ။